Maitiro ekugadzira ako maforodha kutenderera (Pasina Jailbreak) | IPhone nhau
Juan Colilla | | IPhone nhau, iOS 9, Noticias
Yese vhezheni yesystem inounza mitezo yayo, dzimwe nguva mabugs aya anotsamwisa uye anokonzeresa zviputi zvinokuvadza ruzivo rwevashandisi, vamwe vanoda kuziva uye vanotendera mushandisi ita zvinhu zvausingazogone kuita, panguva ino ndauya kuzokuudza nezve mamiriro echipiri.
Iyo inonyanyo kuzivikanwa YouTube Vdebarraquito (uyo akawana nzira yekuwana ruzivo rwevanhu kubudikidza naSiri) awana nzira yakasarudzika yekushandisa bug iripo muIOS 9.3 na9.3.1 inobvumidza mushandisi gadzirisa kuoneka kwemaforodha zvekuti aya akatenderera uye kwete akaenzana, ese asina njodzi, iwe unoda kuziva kuti sei?
Iyo nzira inoita senge yakapusa uye panguva imwechete yakaoma, uye ndeyekuti inoenderana nekutadza kana kugadzirisa yakaderera resolution Wallpaper, mukuita kudaro, mhedzisiro yacho isingatarisirwe sezvo isu tisingangowana iwo akakomberedza maforodha, asi iyo Wallpaper inowana a chitarisiko chakakodzerana neshure rakakwirira rekugadzirisa, iro rinopa mudziyo wedu kutaridzika kwakanaka kwazvo, pamusoro peizvozvo kusiyanisa kubata.
Kuti uite hunyengeri, ingo tevera matanho auchazoona mune inotevera vhidhiyo:
Dhawunirodha mifananidzo kuburikidza Iyi link.
Sezvauri kuona, maitiro acho ari nyore, uye chete chinokanganisa ndechekuti uchafanirwa chinja Wallpaper, kunyangwe zvisiri zvakanyanya kuvhiringidza futi, nekuti pawebhu isu tine mapeji matatu ane rimwe-ruvara kana akawanda-mavara akasiyana, kune ese manakiro.
Kuti utore mifananidzo iyi tinongoda batisisa pavari kudzamara tazoona sarudzo yekuvachengeta pane yedu reel, uye kana tangovapo tinofanirwa kuvaisa se Wallpaper (isina maonero) pane yedu yekumba skrini.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti maforodha ari mu mutsara wekutanga wemifananidzo pane peji rega rega yeiyo springboard (desktop) haizokanganisike, ndiko kuti, ekutanga maficha ekushandisa epeji rega rega anoenderera nekuchengetedza iwo kutaridzika kwemafaira akaenzana, mamwe maforodha anozove akatenderera, kunyangwe chete mune yavo thumbnail. pavari vanozovhura zvakajairika.
Iyi bhagi haina ngozi, Uye haina kurasika nekutangazve iyo system kana chero chinhu chakadai, icho chete chinodiwa ndechekuchengetedza iyo Wallpaper kurodha pasi kubva kune iyo webhusaiti, uye kana isu tichida kudzoreredza maitiro, isu tinongofanirwa kungochinja iwo Wallpaper kune akajairwa.
Kana vamwe venyu muchida kutarisa kuti bhugi iri ririmo mushanduro pamberi pa9.3 kana mune nyowani 9.3.2 mabheji, Iwe wakasununguka kuzviita uye nenzira, tisiye ruzivo rwako mumakomendi 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Maitiro ekugadzira ako maforodha kutenderera (Pasina Jailbreak)
David Vaz Guijarro akadaro
Ehe, iyo bhagi inoshandiswa muIOS 9.3.2 beta (yazvino vhezheni inowanikwa)
Pindura David Vaz Guijarro
Zvakanaka kuziva 😛 Ndatenda zvikuru nekuzivisa!
Izvo hazvigoneke zvachose kuona vhidhiyo pane iPhone, kana MacBook ...
Sei usingaise yakajairwa kupinza paYouTube?
M @ rio akadaro
Handizive kuti unozviita sei asi ini ndinowana vhidhiyo zvakakwana paYouTube.
Pese paanondibvunza kana ndichida kuvhura vhidhiyo iyi muYouTube app.
Ita ongororo pane yako iPhone uye iwe uchaona kuti inoshanda.
Uye kana usiri kuiwana, ipe inobata mishoma mukona yezasi yekurudyi yevhidhiyo 😉
Pindura M @ rio
Mhoro. Hongu zvinoshanda zvakakwana mune itsva betas… Thanks for the tip!
Pakupedzisira ini ndave kukwanisa kubvisa mafara akatenderera maforodha! Vakange vandipengera!
Izvi zvakaitika kwandiri uye kunyange Apple haina kuziva kuti sei https://www.youtube.com/watch?v=QkF3xgWphng
Pindura kuna Pixelated